Xiaomi Mi 5S: famindrana hery ary mpamaky rantsantanana haingana indrindra | Androidsis
Xiaomi Mi 5S: famindrana hery sy mpamaky rantsantanana haingam-pandeha
Ny orinasa sinoa indray Xiaomi mahavita mahazo toerana ao amin'ny tanànan'ny bilaogy, ary tsy mahagaga izany, satria mikasa ny hanolotra kinova nohatsaraina (eny, mbola betsaka lavitra aza) ny MI 5 izay vao navoaka, kinova Ny 5s izay hahitana mpamaky rantsan "ultrasonika" sy fikasihana an-keriny.
Xiaomi dia mandroso miaraka amin'ny Mi 5s vaovao
Tamin'ny volana febroary lasa teo izahay dia nandefa Google ho anao ny Xiaomi Mi 5, fitaovana iray nanolo ny teo alohany, ny Mi 4. Volavola avo lenta sy tsara tarehy amin'ny vidiny tena manintona satria eo anelanelan'ny 300 ka hatramin'ny 400 euro izany arakaraka ny fahafaha-mitahiry voafantina.
Tsy faly amin'ity terminal ity, tsy isalasalana fa iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny tsena ankehitriny, ny orinasan'ny sinoa dia manomana kinova nohatsaraina, ny Xiaomi Mi 5s.
Ny smartphone vaovao dia mitazona ny toetran'ny Mi 5 ankehitriny, izany hoe:
Android 6.0 Marsmallow rafitra fiasa eo ambanin'ny sosona MIUI 7
Fa koa, ny Xiaomi Mi 5s dia hampiditra farafaharatsiny fanatsarana manaraka:
Mpamaky rantsantanana ultrasonika
Force Touch (mitovy amin'ny 3D Touch an'ny iPhone 6s sy 6s Plus) izany hoe efijery mora tohina.
Amin'izao fotoana izao dia mbola miakatra eny amin'ny habakabaka izany rehetra izany. Xiaomi manomana an'ity terminal vaovao mahafinaritra ity, noho izany dia mety mbola azo ovaina ny fiasa sasany, ary toa tsy hahita ny mazava izy ireo aorian'ny fahavaratra. Mazava ho azy fa tsy fantatsika koa ny vidiny. Mila miaritra faharetana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Xiaomi Mi 5S: famindrana hery sy mpamaky rantsantanana haingam-pandeha
Ny Google Photos dia mandrindra ny sary voafafa avy amin'ny fampiharana hafa ankehitriny
Ireo no masontsivana ao amin'ny Samsung Galaxy Note 7